Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ German Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na-emeghe Eziokwu
LB na-enye Full Story of a smart midfield who is best known by the nickname; "Onye na-elekọta". Ụmụ anyị Toni Kroos Akụkọ nke gbasara akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe ọ na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ma ole na ole tụlee Toni Kroos Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Ndụ mbido
A mụrụ Toni Kroos n'ụbọchị 4th nke January 1990 na Greifswald, East Germany.
A mụrụ ya na nne ya, Birgit Kämmer (onye bụbu onye German na-eme egwuregwu badminton na onye nkụzi na-ahụ maka ọdịnala nke oge a) na nna, Roland Kroos (onye bụbu onye ọkachamara ọkachamara na onye na-agba chaa chaa).
N'ịbụ nwata na nwanne ya nwoke bụ Filiks, Toni nwere ihe ọ bụla ọ chọrọ mgbe ọ bụ nwata. Ọ dịghị esiri ndị mụrụ ya ike ikiri ka o tolite.
N'oge ọ bụ nwata, ọ bụghị nwa akwụkwọ kachasị anya ma nọrọ ogologo oge na-eme football na-ekere òkè na mkpado ụlọ akwụkwọ. Tụkwasị na nke a, Toni na-akpa àgwà ọma na klas ma nwee mmasị n'etiti ndị ọgbọ ya n'ụlọ akwụkwọ.
Na-etolite, a kwenyere na Toni adịghị eche na ọ bụ ọkachamara a ma ama, kama ọ na-achọ ihe ịga nke ọma site na ịrụ ọrụ siri ike ma na pitch. Omume a sitere na omume nna ya nke eletrik na-azụ ya na nwanne ya nwoke bụ Felix.
Ọrụ Felix na Toni Kroos 'na-eto eto - Ọrụ aka nke nna ha, Roland
Otú ọ dị, e nwere otu okwu na multitasking. Ijikọta football na akwụkwọ ọgụgụ bụ adịghị ike ya. Ọ họọrọ ilekwasị anya na nke mbụ ma lekwasị anya na nke ikpeazụ. O doro anya, Toni Kroos abụghị ezigbo nwa akwụkwọ mgbe ọ bịara na ọmụmụ ihe. Enye ama ọnọ kpukpru utom usọbọk.
Onye nwatakiri nwatakiri a ma ama amagh i nwata.
Toni dị njikere maka ọhụụ ọhụụ ọ bụla. Ọrụ siri ike ya na ihe ịga nke ọma pụtara ìhè mgbe ọ ghọrọ onye òtù mbụ nke Bayern Munich n'oge 17.
Kemgbe oge ahụ, karịsịa mgbe 2014 World Cup, ụwa maara Toni ka ọ bụrụ otu n'ime archetypes kasị mma nke oge a na-awakpo midfielder.
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Ndụ mmekọrịta
Kroos anọwo na enyi nwanyị ya na ụlọ akwụkwọ kọleji Jessica Farber nwere ogologo oge. Ọmarịcha Wag bụ ihe mere o ji nwee ọganihu n'oge ọ bụ nwata. Dị ka ụzọ na-akwụghachi ụgwọ ya, Toni aghaghị ịkwanye ya dị ka onye nwe obi ya.
Nnụnụ Abụọ Abụọ- Toni na Jessica
Jessica mara mma ma nwee ezi obi. Ọ bụ ọkachamara a ma ama na mpaghara ndị njem na-ahụ maka ndị Germany, ma ọ maara na ọ ga-adịgide na ndụ WAG dị omimi (nkọwa dị n'okpuru ebe a).
O buru ụzọ zute Toni mgbe ha nọ n'ụlọ akwụkwọ ọnụ na oge ọ na-eche nsogbu nke ijikọta football na agụmakwụkwọ. O nyeere ya aka inweta ihe omumu, ihe kacha mma. A hụrụ ịhụnanya ịhụnanya abụọ ahụ dị ka nke a na-apụghị ịgụtahụ site n'oge ha zutere.
Ọdịnihu Toni nwere ike ịbụ na nwanyị ọ bụla ọ chọrọ, ma Jessica bụ nanị nwa agbọghọ na ọ nwere mmasị ọbụna dị ka ọtụtụ ndị ọzọ nwere mmasị. N'ezie, Toni egbughị oge ya na ụmụ agbọghọ ndị ọzọ.
Jessica Farber bụ nwanyị na-ahụ n'anya nke na-enweghị ike iji ya tụnyere ọtụtụ ndị ọzọ Ndi egwu German'ndị na-agbanye n'ahịrị. Jessica Farber kpachaara anya na-ahọrọ shades kama ịnọ na ntụpọ.
Na 13th ụbọchị nke June 2015, Jessica na Toni nwere alụmdi na nwunye nzuzo. Ha lụrụ di ma ọ bụ nwunye mgbe ha lụsịrị nwa ha nwoke n'alụghị di.
Foto foto Toni Kroos
Nwa ha nwoke, Leon mụrụ na 14th nke August 2013. Nwa nke abụọ, nwa nwanyị, Amelie mụrụ na 20 July 2016. Toni bụ nna n'ezie nke na-achọta oge dị mma maka ụmụ ya dịka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Kroos na-akọwa nwunye ya, bụ Jessica Farber dị ka onye na-akwado ya n'èzí n'èzí football. Ọ bụ ezie na Jessica Farber adịghị agba ajụjụ ọnụ, ọ na-egosi mgbe niile na-arụ ọrụ na gala na ụlọ ọrụ nke mba dịka Oktoberfest a ma ama dị ka a na-ahụ n'okpuru ebe a.
Toni na Jessica na Oktoberfest
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Ndụ Ezinụlọ
Ruo mgbe a kwụsịrị ịgba chaa chaa, Toni Kroos sitere na ndị ezinụlọ dị n'etiti.
Nna ya bụ Roland Kroos bụ onye mgbazi ọkachamara nke mesịrị ghọọ onye nkuzi ntorobịa. Ọ bụ onye nkụzi ntorobịa maka Hansa Rostock dị ka n'oge ederede.
Ọ malitere ịmalite ọrụ ya na mbụ, na-azụ ụmụ ya nwoke abụọ na Greifswalder SC. Kroos na-ekwu okwu banyere nwata mgbe ọ na-echeta na ọ na-agba ọsọ na ọzụzụ mgbe nile na nwanne ya nwoke na nna ya.
Ronald Kroos - Ịtọ Ezi Ntọala maka nwa ha nwoke
Birgit Kämmer Kroos (nke e sere n'okpuru) bụ nnukwu nne nke Toni Kroos na nwunye Roland Kroos.
Birgit Kämmer- Nne nke Toni Kroos
A mụrụ ya June 16, 1962, na Greifswald. Birgit Kämmer bụ onye bụbu onye German German Badminton nke dị ka nwa ya, mere ka obodo ya dị mpako. Birgit meriri na ọrụ ya abụọ DDR ndị na-agụ aha na DDR na ndị DDR ndị isi aha ya maka ụlọ ụlọ Gris Greifswald.
Birgit Kroos bi na Rostock taa. Ọ na-arụ ọrụ n'ebe ahụ dịka onye nkụzi nke usoro ndu na egwuregwu. Ụmụ ya na-anọgide na-agbaso ọdịnala egwuregwu nke ezinụlọ dịka ndị ọkachamara n'ịgba ntụrụndụ.
Nwatakịrị Nwata: Toni Kroos nwere nwanne nwoke nke tọrọ ya aha ya bụ Felix Kroos.
A mụrụ ya na 12th nke March 1991 (1 afọ tọrọ Toni). Onye na-eme ihe nkiri na-acha uhie uhie, bụ onye a kọrọ na ya adịghị arụsi ọrụ ike site n'ịmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ, na-amasịkarị ịkụ bọl.
N'ịbụ onye dị mwute na ndò nke nwanne ya nke nwere ọganihu, Felix Kroos achọtawo ọkwá ka ịkwado ịdị ukwuu na-amị amị karịa Toni.
N'oge gara aga nke Werder Bremen, Filiks gbalịsiri ike ịkụda ebe ọ bụla na-aga ebe ọ bụla na-agafe na Union Berlin maka 500,000. Ndepụta ya nke nkwado bụ ihe dị nnọọ nta n'ezie e jiri ya tụnyere nwanne ya tọrọ ya, mana o meriri 2007 'Ụda nke Afọ' mmeri na Mecklenburg-Vorpommen.
Felix egosipụtala ezigbo ọrụ na ọrụ ya, ebe ọ malitere dị ka frontman, mana ọ na-egwuri egwu n'azụ-ọkara iji nwee egwuregwu n'oge ọrụ ya. Ọ na-eto papa ya na onye nkụzi ya (lee anya n'okpuru) maka ihe ọ bụla ya na nwanne ya nwoke nwetara.
Felix na Nna m bụ nwata; Roland Kroos
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Egwuregwu World Cup
Maka ọtụtụ ndị, nke a na-abịa dị ka ihe ijuanya, mana ọ bụghị n'ezie mgbe ịchọrọ na 2014 bụ Ndị otu mba Germanybụ mbụ World Cup mmeri ebe ọ bụ na mba ahụ jikọtara na 1990.
Tupu nke ahụ, East Germany enweghị uru ọ bụla na mba ụwa ma e jiri ya tụnyere ndị agbata obi ya dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ.
Ugbu a, kedu ihe eziokwu Toni Kroos? ... ..Ogha bu ... Ọ bụ naanị otu onye n'ime ìgwè 2014 World Cup nke a mụrụ na mpaghara East German. O si na Greifswald, Mecklenburg-Vorpommen.
Mgbe e gosipụtara eziokwu ahụ, Kroos n'onwe ya yiri ka ọ dị ịtụnanya, ịjụ ajụjụ, "Ọ bụ naanị m bụ otu? Mụ na ndị nne na nna m anaghị enwe oge. "
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Ihe mere n'aha aha ya
Ya mere, kpoos na-enwu gbaa, na ọ nwetara aha aha "Garcon" or "Onye na-elekọta"N'oge okpukpu World Cup.
Kroos nọ na-enye ndị ibe ya nri na-eme ka ha dị mma nke ọma na mgbakọ ahụ dum, na mba ahụ nweere onwe ya chere na aha kwesịrị aha ya mgbe ọ gwụchara 76 site na 79 gafere na otu egwuregwu 2014 World Cup na Portugal.
N'ịkọwapụta, Kroos bụ onye kachasị egwu n'egwuregwu ahụ.
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Nchịkọta Ọrụ
Kroos na-egwuri egwu maka ụlọ ọgbakọ Greifswalder SC, n'ikpeazụ ka ọ na-agafe n'òtù ndị ntorobịa nke Hansa Rostock. Kroos kwagara Bayern Munich's onye ntorobịa setịpụrụ na 2006. Kroos nọ na-efu oge 40 n'oge afọ agụmakwụkwọ n'ihi ọzụzụ. n'ihi na Oge 2007-08, mgbe ọ dị afọ 17, a kwalitero Kroos ka ọ bụrụ ndị òtù Bayern.
Na 2006 Toni Kroos malitere site na ntorobịa Bayern Munich. A kwalitere ya na nke mbụ na 2007. Ọ bụ naanị 17 afọ n'oge ahụ. Nke a gbakwunyere na Bayern Leverkusen na oge 2009 / 10. Ọ na-egwu 33 maka egwuregwu ha. O ji oge 9 mebie ihe mgbaru ọsọ ahụ na 12 na enyere aka.
Ihe ịga nke ọma na Bayern Leverkusen mere ka ọ laghachi na Bayern Munich n'oge ọzọ. O meriri 3 Bundesliga, otu Njikọ Njikọ na Bayern Munich na 2014 FIFA World Cup (ihe mgbaru ọsọ 2 na 4 na-enyere aka). Ọ na-enwe obi ụtọ na ọ gaghị emeri Golden Ball ahụ Lionel Messi. E zigara ya Real Madrid maka ego ezighi ezi na 2014.
Ụmụaka Toni Kroos Akụkọ nke Na -Ihe ọ ga-echeta maka mgbe ezumike nká
N'ihi na ọ na-agafe agafe, nkà, ọhụụ na ikike ya ịmepụta ihe mgbaru ọsọ, yana ogologo oge ya na nnyefe blọgụ site na mpempe akwụkwọ.
Maka ịbụ onye na-arụsi ọrụ ike ma na-arụsi ọrụ ike.
Maka ntụgharị ya, ike anụ ahụ na ike igwu egwu n'ọtụtụ ọnọdụ ebe etiti.
Maka ịbụ onye na-egwu egwu nke ukwuu, na azụ, na-arụ ọrụ igbe, ma ọ bụ ọbụna dịka onye na-eche nche.
Maka ike ya abụọ na-agbaji egwuregwu, na-ejigide ihe onwunwe, ma na-enye ohere maka ndị otu.
Thomas Muller Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ